Umaka: ukuhlela | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 10, 2020 NgoLwesine, ngo-Okthoba 1, 2020 Douglas Karr
Ngokutholwa kwe-ejensi yami futhi manje ngisebenza njengozakwethu kumlingani wami omusha we-Salesforce, nginenkinga lapho ngisebenzisa ama-akhawunti amabili we-G Suite futhi manje nginamakhalenda ama-2 engiwasebenzisayo. I-akhawunti yami yakudala ye-ejensi isasebenza ukuyisebenzisela ukushicilela kwami ​​nokukhuluma - futhi i-akhawunti entsha eye- Highbridge. Ngenkathi ngikwazi ukwaba futhi ngibone ikhalenda ngalinye kwelinye, ngidinga futhi ukukhombisa izikhathi
Mayelana Nomhlangano Wakho Olandelayo
NgoLwesithathu, Februwari 17, 2010 NgeSonto, ngoJuni 28, i-2015 Douglas Karr
Bengicabanga kakhulu ngemihlangano muva nje. Okuthunyelwe nguSeth emicimbini yenkampani yaminyaka yonke kwangikhuthaza ukuthi ngiqale ukwakha lokhu okuthunyelwe. Njengomuntu onebhizinisi lesisebenzi esisodwa, kufanele ngiqaphele ngokuphelele ukuthi mingaki imihlangano engiya kuyo engangenisi imali. Usuku ngalunye, ngimenyelwa emhlanganweni - imvamisa inkomishi yekhofi noma isidlo sasemini. Isikhathi esiningi, bangobudlelwano bobuchwepheshe noma baholele ngakho-ke